အဖြစ်များသော အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်းပြဿနာများ - Hello Sayarwon
ကျန်းမာရေးစင်တာ » အစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါများ
ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတည်းဖြတ်သူ Dr. Phyo Wai Lynn | ရေးသားသူ Dr.Thant Zin
Update Date အောက်တိုဘာ 23, 2020 .2mins read
အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်းစနစ်ဟာ ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာ ရှုပ်ထွေးပြီးရှည်လျားတဲ့ စနစ်တခုဖြစ်ပါတယ်။ အူလမ်းကြောင်းတခုလုံးဟာ ပါးစပ်ကနေ စတင်ပြီး စအိုမှာဆုံးပါတယ်။ အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်းရဲ့ လုပ်ငန်းတာဝန်ကတော့ စားသောက်လိုက်တဲ့ အစားအသောက်တွေကနေ ကိုယ်ခန္ဓာအတွက် လိုအပ်တဲ့ အာဟာရဓာတ်တွေ စုပ်ယူပေးပြီး မလိုအပ်တဲ့ အညစ်အကြေးများကို ပြန်လည်စွန့်ထုတ်ပေးခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်းဟာ ရှည်လျားလှသလို ပြဿနာလည်း မျိုးစုံဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ရောဂါအစုံဖြစ်နိုင်ပြီး လက္ခဏာလည်းဆင်တူကြတာမို့ တခါတရံမှာ ထင်မြင်ယူဆချက်မှားယွင်းနိုင်ပါတယ်။ အသေးအဖွဲပြဿနာတွေဖြစ်ပေမယ့် ထိရောက်စွာ မကုသဘဲ ထားလိုက်ရင် ပိုမိုဆိုးရွားသွားတာတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မည်သည့်ရောဂါလက္ခဏာမဆို ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပြသနိုင်ရင် အကောင်းဆုံးပါပဲ။
ယခုဆက်လက်ဖော်ပြမယ့် အကြောင်းအရာတွေကတော့ အတွေ့ရများတဲ့ အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်းပြဿနာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
တရက်နှစ်ရက်လောက် ဝမ်းချုပ်ခြင်း၊ ဝမ်းမာခြင်းများဟာ သိပ်ပြီးပြဿနာ မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ရက်ကြာကြာ ဝမ်းချုပ်ခြင်း၊ စမြင်းခံခြင်း စတာတွေဟာ အူလမ်းကြောင်းကို ထိခိုက်လာနိုင်ပါတယ်။ အလွန်အမင်း ဝမ်းချုပ်ခြင်းကြောင့် စအိုဝန်းကျင်မှ သွေးပြန်ကြောများဖောင်းကာ လိပ်ခေါင်းဖြစ်ခြင်း၊ စအိုကွဲရှခြင်း စတဲ့ပြဿနာမျိုးစုံ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
အမျှင်ဓာတ်လုံလောက်စွာ စားခြင်း၊ ရေသောက်ခြင်း၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း စတဲ့နေထိုင်စားသောက်ပုံတွေ ပြောင်းလဲပြီး ဝမ်းချုပ်ခြင်းကို ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အလွန်အမင်း ဝမ်းချုပ်နေရင်တော့ တခြားရောဂါတခုခု (ဥပမာ အူမကြီးကင်ဆာ၊ အာရုံကြာဆိုင်ရာ ပြဿနာ၊ ဟော်မုန်းပြဿနာ စတာတွေ)ကြောင့် ဖြစ်နိုင်တာမို့ ဆရာဝန်ပြသင့်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့အူလမ်းကြောင်းဟာ အစားအစာတချို့ကို လက်မခံနိုင်ဘဲ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီအခြေအနေကို food intolerance လို့ ခေါ်ပါတယ်။ Allergy ခေါ် ဓာတ်မတည့်ခြင်းနဲ့ မတူပါဘူး။ ဓာတ်မတည့်ခြင်းဟာ ယားယံခြင်း၊ အင်ပျဉ်ထခြင်း၊ အသက်ရှူကြပ်ခြင်း စတာတွေဖြစ်စေပြီး အစာလက်မခံတဲ့ အခြေအနေကတော့ အူလမ်းကြောင်းကိုပဲ သက်ရောက်မှု ရှိပါတယ်။ အစာလက်မခံတဲ့အခါ လေပွခြင်း၊ ဗိုက်အောင့်ခြင်း၊ ဝမ်းပျက်ခြင်း၊ ရင်ပူခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ပျို့အန်ခြင်း စတာတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မိမိနဲ့အဆင်မပြေတဲ့ အစားအစာတွေကို မှတ်သားထားပြီး နောင်မှာရှောင်ကြဉ်ခြင်းအားဖြင့် ဒီပြဿနာကို ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။
စီးလိယတ်ရောဂါ (Celiac Disease) ဟာ အစာလက်မခံတဲ့ အခြေအနေတခုဖြစ်ပါတယ်။ ဂလူတန်လို့ခေါ်တဲ့ ပရိုတိန်းတမျိုးကို စားမိရင်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် စီးလိယတ်ရောဂါရှိသူတွေဟာ ဂလူတန်မပါတဲ့ အစားအစာများကိုပဲ သတိပြုရွေးချယ်သွားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
GERD (အစာအိမ်မှ အချဉ်ဓာတ်ပြန်ဆန်တက်ခြင်း)
ဒီပြဿနာဟာ လူအတော်များများ ကြုံဖူးကြတဲ့ ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။ အစာအိမ်နဲ့ အစာရေမျိုကြားကို ပိုင်းခြားထားတဲ့ ကြွက်သားလျော့ရဲလာရင် အစာအိမ်ထဲက အက်ဆစ်ဓာတ်ကဲတဲ့ အစာချေရည်တွေဟာ အစာရေမျိုအထိ ပြန်ဆန်တက်လာတတ်ပါတယ်။ အဆိုပါ အခြေအနေမှာ ရင်ခေါင်းအတွင်း မအီမသာဖြစ်ခြင်း၊ ချောင်းခြောက်ဆိုးခြင်း၊ ပါးစပ်အတွင်းချဉ်ခြင်း၊ ရင်ပူခြင်း၊ အစာမျိုချရ ခက်ခဲခြင်း စတာတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ GERD အတွက် သောက်သုံးနိုင်တဲ့ ဆေးဝါးတွေလည်း ရှိပါတယ်။ နားလည်တတ်ကျွမ်းသူတွေနဲ့ တိုင်ပင်ဖို့ လိုပါတယ်။
အူလမ်းကြောင်းရောင်ရမ်းသောရောဂါ (Inflammatory bowel disease)
အူလမ်းကြောင်း တနေရာရာမှာ နာတာရှည်ရောင်ရမ်းတဲ့ အခြေအနေ ဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကအားဖြင့် နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ ခရွမ်းရောဂါ (Crohn’s disease) ကတော့ အူလမ်းကြောင်းတခုလုံးကို (အများအားဖြင့် အူသိမ်နှင့်အူမ) ကို ဒုက္ခပေးပါတယ်။ Ulcerative Colitis ကတော့ အူမကြီးမှာ ဖြစ်ပွားပါတယ်။ အူလမ်းကြောင်းရောင်ရမ်းတဲ့ ရောဂါတွေမှာတော့ ဝမ်းပျက်ခြင်း၊ ဗိုက်အောင့်ခြင်း စတာတွေအပြင် အစားပျက်ခြင်း၊ ဝမ်းကျန်သလိုခံစားရခြင်း၊ ညအချိန်ချွေးထွက်ခြင်း၊ စအိုမှသွေးယိုခြင်း စတာတွေ ကြုံနိုင်ပါတယ်။ အူလမ်းကြောင်းရောင်ရမ်းတဲ့ ရောဂါတွေကို စောစီးစွာ သိရှိပြီး ကုသမှုခံယူခဲ့ရင် အူလမ်းကြောင်းကို ထိခိုက်မှုနည်းစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အထက်ဖော်ပြခဲ့ပြီးတဲ့ လက္ခဏာတွေကြုံရရင် ဆရာဝန်ပြသင့်ပါတယ်။ စောစီးစွာ ကုသမှုခံယူခြင်းအားဖြင့် နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေ ထပ်မံမဖြစ်ပွားအောင် ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ သွေးဝမ်းသွားခြင်း၊ ဆက်တိုက်ပျို့အန်နေခြင်း၊ ဝမ်းဗိုက် ဆိုးရွားစွာအောင့်ခြင်း၊ ကိုယ်အလေးချိန်ရုတ်တရက်ကျဆင်းသွားခြင်း စတဲ့လက္ခဏာတွေ ကြုံတွေ့ရရင်တော့ အရေးပေါ်ဆေးကုသမှု ခံယူသင့်ပါတယ်။ အဆိုပါ လက္ခဏာတွေဟာ ရောဂါပိုးဝင်ခြင်း၊ သည်းခြေကျေက်တည်ခြင်း၊ အသည်းရောင်ခြင်း၊ ကင်ဆာဖြစ်ခြင်း၊ အူလမ်းကြောင်းအတွင်းပိုင်း သွေးယိုခြင်း စတာတွေကြောင့် ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။
https://www.healthline.com/health/digestion-problems Accessed Date 23 October 2020
အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်းကို ဒုက္ခပေးသော ရောဂါပိုးကူးစက်ခြင်းများ
တစ်နေ့တာကို သက်လုံ ကောင်းကောင်း နဲ့လှုပ်ရှားနိုင်စေဖို့
သက်လုံ လို့ဆိုလိုက်ရင် အားကစားသမားတွေနဲ့ပဲ ဆိုင်တယ်လို့ ပြေးမြင်ကြပါတယ်။ သက်လုံကောင်းမှ နေ့စဉ်ဘဝမှာ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို အကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်မှာပါ။
အခြေခံကျန်းမာရေး, အခြေခံကျသည့် ကျန်းမာရေးဗဟုသုတများ ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 16, 2021 .2mins read
COVID အစ ဝူဟန်ကဆိုတာ တကယ် မှန်ကန်ရဲ့လား
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့တုန်းက တရုတ်နိုင်ငံ ဝူဟန်မြို့ ပင်လယ်စာဈေးကနေစတင်ခဲ့တဲ ...
ကျန်းမာစွာနေထိုင်ခြင်း, Corona Virus, COVID-19 ဒီဇင်ဘာ 15, 2020 .2mins read
အရိုးပွခြင်းကို ကာကွယ်နိုင်ဖို့ ဆင်ခြင်သင့်တဲ့ အစားအသောက်တွေ
ကျန်းမာကြံ့ခိုင်တဲ့အရိုးတွေပိုင်ဆိုင်ဖို့ စားသုံးရမဲ့အစားအသောက်တွေသိရှိရုံနဲ့မပြီးသေးပါဘူး။ အရိုးကိုတဖြည်းဖြည်းအားနည်းစေနိုင်တဲ့ အစားအသောက်တွေရှိပါတယ်။
အရိုးနဲ့ကြွက်သားကျန်းမာရေး, အရိုးပွရောဂါ, ကျန်းမာရေးစင်တာ နိုဝင်ဘာ 27, 2020 .2mins read
အဆုတ်ဟာ ရေမြှုပ်လို အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပြီး အသက်ရှူသွင်းရှူထုတ်ပေးခြင်းအားဖြင့် ကိုယ်ခန္ဓာအတွက် လိုအပ်တဲ့ အောက်ဆီဂျင်ကို လေထုထဲကနေ ရယူပေးပါတယ်။
ကင်ဆာရောဂါများ, အဆုတ်ကင်ဆာ အောက်တိုဘာ 20, 2020 .2mins read
COVID-19 အတွက် ကုထုံးတစ်ရပ် sotrovimab
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် စက်တင်ဘာ 17, 2021 .2mins read
မွေးကင်းစ ဘေဘီလေးကို ကိုဗစ်ကာလမှာ ဒီလို ကာကွယ်ပါ
ကိုဗစ်ကာလမှာ ဘေဘီလေး ကျန်းမာနေစေဖို့ ဘယ်လို ပြင်ဆင်ပေးကြမလဲ……….
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် ဩဂုတ် 5, 2021 .2mins read
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် ဩဂုတ် 3, 2021 .2mins read